April | 2012 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on April 30, 2012 by chitnge
မဂ်အကြောင်းဖိုလ်အကြောင်း ကိလေသာကို သတ်သောအခါ မဂ်ဖြစ်၍ အောင်မြင်လျှင် ဖိုလ်သို့ကူးကာ နိဗ္ဗာန်သို့ ပြေးဝင်နိုင်သည်ဟူသော အဆိုရှိသည် (ကိလေသေ မာရန္တော နိဗ္ဗာနံ ဂစ္ဆတီတိ မဂ္ဂေါ)။ နိဗ္ဗာန်ကို စံဝင်လျှင် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်များ ဖြစ်သည် ဟူ၍ အခိုင်အမာ အထောက်အထား အဆုံးအမများ ရှိသည် (စတုမဂ္ဂဉာဏေန သစ္စိကာ တဗ္ဗံ)။ ဤနေရာ၌ ဥပမာ – စတုမဂ္ဂ စိတ်ဏေန ဟူသောသဘော မရှိပါ။ စတုမဂ္ဂ ဉာဏေန ဟူသော အစဉ်အလာပဲ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဒုက္ခသစ္စာ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
မဂ်ရခြင်းမရခြင်း…(၃) ဟိုတစ်လောကပဲ နာမည်ကြီး ဆရာတော်တစ်ပါးက “ဘာသာတွေဟာ အကုန်လုံး အတူတူပဲ” ဆိုတော့ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ကောက်ရေးလိုက်တယ်။ မတူပါဘူး၊ မတူတာ မတူဘူးလို့ ပြောပါ၊ တူပါတယ်ဆိုပြီး စည်းရုံးတာက စည်းရုံးချင်တဲ့ သဘောကိုတော့ အပြစ်မပြောဘူး၊ လွဲမှားတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ မစည်းရုံးပါနဲ့။ သူတို့ကလည်း နောက် မသိတာမှ မဟုတ်ဘဲ သူတို့လည်း မတူဘူးလို့ သိနေတာပဲ၊ ဒီတော့ ဒီလို လွဲမှားတဲ့ စည်းရုံးချက်တွေ မလုပ်ပါနဲ့လို့ ကျွန်တော် ချက်ချင်း ဒီဂျာနယ်ထဲမှာပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts	| Leaveacomment
မဂ်ရခြင်းမရခြင်း…(၂) တစ်ခါကလည်း – စာရေးသူတွေ့ဖူးပါတယ်၊ တစ်ခါက စာရေးသူရဲ့ ဆောင်းပါးကို သူတို့ပဲ လက်ခံပြီးတော့ သူတို့ ဂျာနယ်မှာ ထည့်တယ်။ နောက် အဲဒီလိုထည့်တော့ နောက်ကျတော့ တစ်ခါ ဒီလိုမှန်းသိ မထည့်ပါဘူးဆိုပြီး ပြန်ပြီးတော့ အဲဒီ ဂျာနယ် တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ ပြန်ရေးတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီကစပြီး အဲဒီဂျာနယ်ကို ကျွန်တော် မရေးတော့ဘူး။ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးပဲ။ သူတို့ ကြိုက်လို့ ထည့်ပြီးပြီပဲ ထည့်ပေါ့၊ နောက်မထည့်ရင် မထည့်နဲ့ပေါ့။ ဒီ ထည့်ပြီးသားဟာကိုပဲ … Continue reading →
Posted on April 27, 2012 by chitnge
နိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်၍ အချို့က နိဗ္ဗာန်နှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဖြစ်၍ သိသင့်သည်ဟု နားလည်ကြသည်။ အချို့ကလည်း နိဗ္ဗာန်ကို မြင့်လွန်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ မြင့်လွန်းသည်ဟု ယူဆသူများသည် မှားယွင်းသောသဘော ခံယူသူများ ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာများ သိရမည်။ တစ်ခု သတိထားရမည်မှာ နိဗ္ဗာန်ကို လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပာယ် မဖွင့်ရန်ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကိစ္စ၌ ဆရာကောင်း သမားကောင်းကို ချည်းကပ်မှသာလျှင် အမှန်အကန် ပြောပြနိုင်ပေလိမ့်မည်။ စာရေးသူသည် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Posted on April 26, 2012 by chitnge
နိဗ္ဗာန်ဟူသည် နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုတော့ ဆရာကောင်း သမားကောင်း ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ဖူးသော ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ပြောနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းမှာ ခက်ခဲနက်နဲသည် ဆိုသည်မှာ အဆိုအဆုံးမရှိသည်။ နိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်ရည်ထဲတွင် အသိခက်ခြင်း နက်နဲခြင်းဟူသော ဂုဏ်ရည်များ ပါရှိနေသည်။ အံ့သြဖွယ်ရာနှင့် ထူးခြားသည်မှာ ဤလောက၌ (သို့မဟုတ်) (၃၁)ဘုံ၌ ထပ်တူထပ်မျှ နှိုင်းခိုင်းစရာ ဥပမာ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်သည် ထပ်တူထပ်မျှ ဥပမာ တင်ပြစရာ ရှင်းပြစရာ မရှိနိုင်သဖြင့် ၀င်စားဖို့ ခက်သည်။ တနည်းအားဖြင့် တွေ့ကြုံ သိမြင်နေရသော လောကီကိစ္စတို့သည် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
အနှစ်သာရအားဖြင့် မြန်မာများကပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိပုံရတယ် .. .. .
အနှစ်သာရအားဖြင့် မြန်မာများကပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိပုံရတယ် .. .. . ကမ္ဘာမှာ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေကြတာ သိပ္ပံပညာဆိုရင် အရမ်းမြင့်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်ပြီလို့တောင် အားပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာမှာလည်း သဘာဝတရားကို သိဖို့ကြိုးစားတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တစ်ဖက်၊ သဘာဝတရားအကြောင်း သိလာတော့ လက်နှက်ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ဖို့အတွက် လိုင်းကတစ်ဖက်၊ ဆေးဝါးနဲ့ လူမှုရေးအသုံးအဆောင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လူ့ကောင်းကျိုးနဲ့ လူ့အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးကို ဆောင်ရွက်တဲ့ဖက်က တစ်ဖက် – အဖက်ဖက် ရှိကြတယ်။ အနှစ်ချုပ်ရင်တော့ မြန်မာတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဘဝမှာပိုအဓိပ္ပာယ် ရှိတယ်လို့ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
ကြည့်တတ်လျှင်တော့မြင်နိုင်ပါသည် .. .. .
Posted on April 25, 2012 by chitnge
ကြည့်တတ်လျှင်တော့မြင်နိုင်ပါသည် .. .. . ကမ္ဘာသည် ရုပ်ဝတ္ထု လွန်စွာတိုးတက် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကလည်း ကောင်းစွာ အထောက် အပံ့ပြုသည်။ ကမ္ဘာသည် အဘက်ဘက်မှ တိုးတက်ပြည့်စုံနေသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ သို့သော် မြန်မာတို့ကလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့်ကိုယ် ကျင့်ကြံကြိုးစား အားထုတ်နေသူများ ရှိရာ၊ ဉာဏ်ပညာ၏ အဆင့်မြင့်မှု စိတ်ဓာတ်၏ အေးငြိမ်းချမ်းသာမှုတို့ကို ရရှိခံစားနိုင်သည်။ ဤကိစ္စမှာမူ လက်တွေ့ပြယုဂ်ဖြင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်မှု မရှိဟုဆိုနိုင်သော်လည်း ဝင်စားလေ့လာ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်လျှင် မြန်မာတို့ကလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့်ကိုယ်၊ ငြိမ်းချမ်းကြောင်းကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာကလည်း တိုးတက်ပါသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, သိပ္ပံ	| 1 Comment
အသိပညာနှစ်မျိုးနှစ်စား…. အသိပညာကို နှစ်မျိုးနှစ်စားဟု ဖော်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ တစ်မျိုးမှာ အကြောင်းအချက်အားဖြင့် ဆိုင်ရာ အသိပညာ (Knowledge about facts) လို့ သုံးကြတယ်။ နောက်အသိပညာ တစ်ခုက အချက်အလက် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ယုတ္တိနည်းကျ ဆက်စပ်နေတဲ့ အသိပညာပဲ။ ဒါကိုတော့ (Knowledge about the logical relation between facts) လို့ သုံးကြတယ်။ ကမ္ဘာကတော့ အသိပညာနှစ်ခုစလုံးကို လိုက်တယ်လို့တော့ ၀န်ခံကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (Knowledge of facts) ကို နံပါတ်ကုန် … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, ဗုဒ္ဓဘာသာ	| Leaveacomment
အပြိုင်အဆိုင်သုတေသနလုပ်နေကြတယ်… ကမ္ဘာကြီးကလည်း ရုပ်လောကအကြောင်းကို သုတေသန လုပ်နေကြတယ်။ သုတေသန လုပ်သလောက် လည်း ထွင်းထွင်းဖောက်ဖောက် သိမြင်လာကြတယ်။ စကြ၀ဠာအကြောင်း ကောင်းကောင်း သိလာကြတယ်။ စကြ၀ဠာ ဘယ်တုန်းက စဖြစ်တယ် ဆိုတာတောင် ခန့်မှန်းလာနိုင်တယ်။ ရုပ်ကမ္ဘာအကြောင်းကိုလည်း အက်တွမ်ကနေ၊ အီလက်ထရွန်ကနေ ကွာ့(ဒ်)အထိ အထူးလေ့လာနေကြတယ်။ (The most substantial elements) ခေါ်တဲ့ အခြေခံအကျဆုံးသော ဓာတ်သဘာဝ အမှုန်များကို စူးစမ်းလေ့လာနေကြတယ်။ လေ့လာတဲ့အခါ တိုက်ရိုက်လေ့လာနိုင်တာကို တိုက်ရိုက်လေ့လာပြီး တစ်ဆင့်ခံ (Indirect verification) ခေါ်တဲ့ တစ်ဆင့်ခံ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, စကြာဝဠာ, ဗုဒ္ဓဘာသာ	| Leaveacomment
Posted on April 24, 2012 by chitnge
ပယ်သောအခါ ဘာကျန်သနည်း? အချို့က ပယ်သောအခါ ဘာကျန်တော့မှာမည်နည်း? ဟု သဘောရကြသည်။ ယင်းသဘောမှာ လက်တွေ့ မပယ်သေးခင် ပေါ်လာသော သဘောဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ပယ်သောအခါ အဖြေမှာ ပယ်နိုင်သော စွမ်းရည်ကျန်သည်၊ ယင်းကိစ္စကို ပယ်ဖူးသူမှသိသည်။ ပယ်သောအခါ ပယ်နိုင်သောစွမ်းရည်ကျန်သည် ထိုစွမ်းရည်သည် အဖိုးတန်ဆုံးဖြစ်သည်။ ယင်းစွမ်းရည်သည် အင်အားရှိလာသောအခါ အောင်မြင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဖြေပေးပါသည် မြစ်ချောင်းတစ်ခုကို လှေဖြင့် ဒီဘက်ကမ်းကခွာလျှင်၊ ဒီဘက်ကမ်းက ကွာရုံမက ဟိုဘက်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်သည်။ ထို့အတူ ပေါ်စိတ်များကို Tags: Buddhism, Myanmar … Continue reading →
Posted on April 23, 2012 by chitnge
ပေါ်စိတ်ကိုပယ်ခြင်း ပေါ်စိတ်ကိုပယ်ခြင်းသည် ဆေးကြောခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် အာရုံခြောက်ပါးမှ အသိသဘောများ ၀င်လာရာ မသန့်ရှင်းသေးခြင်း အညစ်အကြေးပါခြင်း အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်သည်။ ထိုအခါ ပေါ်စိတ်ကို ပယ်ရလေသည်။ ပေါ်စိတ်ကို ပယ်ခြင်းသည် ဆေးကြောခြင်း တစ်မျိုးပင် ဖြစ်သည်၊ စိတ်ကို ဆေးကြောရာကြသည်။ ပေါ်စိတ်ကို ပယ်သဖြင့် နောက်ထပ်ပေါ်လာသော စိတ်သည် ပထမစိတ်ထက် ပို၍ သန့်စင်သွားနိုင်လေသည်။ ပယ်ပါ ပယ်ပါများလျှင် စိတ်သည် ပို၍ သန့်စင် သန့်စင် သွားနိုင်သည်။ စိတ်များ သန့်စင်အောင် လုပ်နိုင်သော အကျင့်သည် … Continue reading →
အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ရန်လမ်းစ ဘာစိတ်ပေါ်မလဲ – ပေါ်စိတ်တို့သည် အနိစ္စဖြစ်ကြသည်ဟု ကြိုတင်သိနားလည်ထားသည်။ အသိပညာ ရရာရကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းထဲတွင် ပေါ်စိတ်ကို အနိစ္စရှုခြင်းသည် ထူးခြား မြင့်မြတ်သော ကျင့်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပေါ်စိတ်ကို အနိစ္စရှုသောအခါ ကြာသော် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လျှက် ပေါ်လာသော စိတ်တို့အား အနိစ္စဟု နားလည်သဘောပေါက်သွားသည်။ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်သွားသည်။ ထိုအခါ အတော်အသင့် အတိုင်းအတာထိ ဆိုးဝါးသော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟနှင့်ယှဉ်သော စိတ်များသည် အနိစ္စ ဖြစ်လွယ်ကြသည်။ ကျင့်ဖန်များလေ ပိုင်နိုင် ကျွမ်းကျင်လေ ဖြစ်သည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, အနိစ္စ, အနိစ္စရှု	| Leaveacomment
ဉာဏ်ထွက်နည်း ဉာဏ်တက်နည်း ဉာဏ်ထက်နည်း
ဉာဏ်ထွက်နည်း ဉာဏ်တက်နည်း ဉာဏ်ထက်နည်း သူသူကိုယ်ကိုယ် ဉာဏ်ထက်လိုကြသည်၊ ဉာဏ်တက်လိုကြသည် – သို့သော် နည်းမသိသဖြင့် အယောင်ယောင် အမှားမှား လုပ်တတ်ကြသည်။ စာရေးသူသည် ဉာဏ်ထွက်နည်း ဉာဏ်တက်နည်း ဉာဏ်ထက်နည်းများကို သိသည်။ ဉာဏ်ထက်နည်း၊ ဉာဏ်တက်နည်း ဆိုသည်မှာ မိမိ၏ပေါ်စိတ်အား အပျက်ရှုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤကျင့်စဉ်သည် လွယ်သည်ဟု ယူဆပြီး မကျင့်ဖြစ်ကြ၍သာ ဉာဏ်မထက်ခြင်း၊ ဉာဏ်မတက်ခြင်း၊ ဉာဏ်မထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာမူ လွန်စွာကောင်းသော ကျင့်စဉ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အများသူငါသည် မသိကြသေးချေ .. .. .. (သို့) … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, အနိစ္စ, အနိစ္စရှု, အပျက်ရှု	| Leaveacomment
အသိပညာသစ်အတွက်ခြေလှမ်းများ သိပ္ပံသည် အသိပညာသစ်အတွက် ခြေလှမ်းများ လွန်စွာသွက်သည်၊ လွန်စွာစိပ်သည်။ သူတို့သည် အသိပညာအတွက် လွန်စွာလည်း စိတ်ဝင်စားသည်၊ လွန်စွာလည်း ထက်သန်သည်။ ဥပမာ — — စကြဝဠာအကြောင်း သူတို့သိခြင်းကို သူတို့လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားသည်။ What do we really know about the Universe? ဟူ၍ ဆွေးနွေးကြသည်။ How do we know it? ဟူ၍လည်း တင်ပြကြသည်။ စကြဝဠာအကြောင်း ဘယ်လောက်သိသလဲ? ဘယ်လိုသိသလဲ? စသည်ဖြင့် … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, စကြာဝဠာ, သိပ္ပံ, အိုင်းစတိုင်း, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
Total Visitors : 7455
Today Visitors : 81